Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Farshaxanka Aasiya wuxuu shido suuqa adduunka
20:00 18kii Noofambar, daabacaad xaddidan oo isku dhafan Digital Art (IDA) nuqul ka mid ah Sawirka Faahfahsan ee Wabiyada iyo Buuraha Fu Baoshi (1: 1) ayaa lagu soo bandhigay xaraashka Rongbaozhai ee Shiinaha, kaas oo leh taariikh 350 sano ah iyo guryuhu waxay ka shaqeeyaan afartii xadaaradood ee hore. IDA waxa la soo marsiiyay IP.PUB, oo xidhiidh la leh Seud Technology. Xaraashka waxaa marti galiyay isticmaale EASTIP OpenSea, goobta ganacsiga ugu weyn ee dhijitaalka ah ee adduunka.
Nooca IDA ee Sawirka Faahfaahsan ee Wabiyada iyo Buuraha waxa uu ka dhigan yahay rinjiyeyn muuqaal heersare ah, kaas oo buraashkiisa iyo midabayntiisu ay ku jiraan qaab-dhaqameedka Shiinaha, laakiin ka kooban iyo midab-ururintooda tixraaca kuwa rinjiyeynta saliidda Galbeedka. Qiimaheeda faneed sare waxa uu sababay dagaal tartan xaraashka OpenSea, iyo rinjiyeyn kale oo uu sameeyay Fu Baoshi ayaa lagu iibiyay CNY 187 milyan xaraash bishii Juun 2017.
Kadib laba saacadood oo tartan adag ah, IDA# 800002 # 00001, DetSawirka Wabiyada iyo Buuraha ugu dambayntii waxa ku guulaystay isticmaaluhu, qiimo dhan USD $13785.53. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee qayb ka mid ah farshaxan dhaqameedka Shiinaha ay soo gasho suuqa caalamiga ah iyada oo lagu daray tignoolajiyada blockchain, waxayna siisay hab cusub oo dunidu u aragto farshaxanka Oriental, iyo maqalka codka Shiinaha.
IDA waxaa lagu daabacay nidaamka diiwaangelinta magaca dhabta ah ee shabakada IP.PUB, oo ku salaysan Wenchang Chain ee BSN Consortium Blockchain, kaas oo u hoggaansamaya xeerarka Shiinaha. Iyada oo la kala saarayo ururinta farshaxanka jireed ee shahaadooyinka lahaanshaha dhijitaalka ah, aqoonsi kasta oo lahaanshaha dhijitaalka ah ee IDA iyo socodka nidaamka ayaa si cad loo raadin karaa oo si sax ah loo xaqiijin karaa.
Marka shahaadooyinka lahaanshaha dhijitaalka ah ee IDA lagu iibiyo caalami ahaan, waxaa laga soo wareejiyaa Wenchang loona gudbiyaa Ethereum iyada oo loo marayo tignoolajiyada iskutallaabta IRIS Hub (aka IRISnet). Ethereum ayaa markaa isku xira OpenSea iyo isweydaarsiga kale ee caalamiga ah kuwaas oo taageeri kara shuruudaha u hoggaansanaanta ee sharciyo kala duwan. Tani waxay siinaysaa suuqa caalamiga ah habayn-saaxiibtinimo farshaxanka Oriental lagu kalsoonaan karo, oo asal ahaan la raadin karo.
EASTIP waxay sidoo kale isticmaali doontaa OpenSea si ay u bilawdo IDA-yada farshaxannada kale ee caanka ah ee Oriental, sida Qi Baishi's Pattra Leaves Cayayaanka Rinjiyeynta iyo Heesta Kalluumeysiga Li Keran ee Wabiga Cad. La soco si aad u aragto in shaqooyinkan dhaqan ahaan muhiimka ah ee ka yimid mid ka mid ah afarta xadaaradood ee qadiimiga ah ay ku dhalaali doonaan midabyo cusub kadib is dhexgalka tignoolajiyada NFT iyo IDA!